Michael Jackson, Boqorka Pop Las Vegas dib-u-muuqashada dhalashada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Michael Jackson, Boqorka Pop Las Vegas dib-u-muuqashada dhalashada
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Fashion • LGBTQ • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Tartanka Qoob -ka -ciyaarka Michael Jackson 2021
Michael Jackson, Boqorka Pop -ka wuxuu ahaan lahaa 63 jir Axad. Tani waxay ahayd fursad weyn oo dib loogu soo noqdo Las Vegas oo ku taal Cirque du Soleil.
Waxaa loogu magac daray "Boqorka Pop", waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah tirooyinka ugu muhiimsan dhaqanka qarnigii 20 -aad. In ka badan afar sano oo shaqo ah, wax ku biirinta muusikada, qoob-ka-ciyaarka iyo moodada, oo ay weheliso noloshiisa gaarka ah ee la faafiyey, ayaa isaga ka dhigtay shaqsi caalami ah oo ku jira dhaqanka caanka ah.
Waxay dareentay in Michael Jackson uu ka qaybgalay xafladdiisa markii Cirque du Soleil iyadoo lala kaashanayo The Estate of Michael Jackson ayaa u dabbaaldegay dhalashada "King of Pops". Michael Jackson wuxuu ahaan lahaa 63 jir.
Dabaaldegga dhammaadka dhalashada ee dhalashada ayaa bilaabmay Sabtidii, Agoosto 28, iyada oo loolankii #MyMJMoves loolankii qoob ka ciyaarka, oo uu xukumay qoraa iyo agaasime Michael Jackson ONE, Jamie King, oo tusay heesaha muusigga, Rich iyo Tone Talauega.
Axaddii, Agoosto 29, 2021 ka -qaybgalayaashu waxay awoodeen inay la kulmaan naqshadeeyaha dharka dheer ee Michael Jackson iyo qoraaga “The King of Style: Labbiska Michael Jackson,” Michael Bush markii uu saxiixay buugga.
Dabaaldegyada maalintaas waxaa lagu soo bandhigay Q&A gaar ah oo leh agaasime caan ah iyo heesaha, Kenny Ortega, oo lagu aqoonsanayo sannad -guurada 25 -aad ee soo socota ee “HIStory World Tour,” oo la bilaabay Sebtember 7, 1996.
Ortega waxaa masraxa ku soo biiray xubno ka tirsan hal -abuurka Michael Jackson ONE, Travis Payne, Jamie King, Rich and Tone, oo dhammaantood la shaqeeyay Kenny Ortega iyo Michael Jackson. Samaynta muuqaalka la yaabka leh wuxuu ahaa durbaankii Michael ee 30 sano, Jonathan “Sugarfoot” Moffett, oo ku soo biiray kooxda si ay ula wadaagaan daqiiqado xusuus leh oo dhiirrigelin leh la shaqaynta Michael.
Ka qaybgalka iyo ku raaxaysiga waxqabadyada galabta ayaa ahaa ina Michael Amiir oo ay weheliyaan dhowr ilmaadeeradiisii ​​ah iyo xubnaha qoyskiisa. Dhacdooyinka maalinta ayaa ku dhammaaday qof walba, oo uu ku jiro wiilka yar ee Michael, Bigi, oo ku biiraya walaalkiis iyo xubnaha kale ee qoyska iyo dhagaystayaal la iibiyay si loo helo waxqabad tamar-sare leh ee Michael Jackson ONE. Dadka haysta tigidhada bandhigga ayaa sidoo kale fursad u helay inay la kulmaan wakiillo ka socda The Estate of Michael Jackson, oo ay ku jiraan ka qaybgalayaasha hawlaha galabta.